သင်္ဘောသားရင်ဖွင့်သံ (၃)... Seamen's Voice-3 ~ MSU Portal
5/03/2013 11:51:00 AM Navi Kyaw 1 comment
ဟီးဟီး……တောင်ဖတ်မြောက်ဖတ် လုပ်လိုက်တာ ရေးချင်လာ….လို့…ဘာတဲ့…အရာ၇ှိ..အသစ်တွေက ဘာမှမတတ်ဘူး တို့…ဘာ …. ညာတို့ပါ…..ဘယ် တတ် မလဲ…ဂျ…..ကျောင်းတွေက …စာဘဲတင်တာ ကို…လက်တွေ့နဲ့မှ…စပ်..စပ်မပြတာ….ကျောင်းတွေက တိုးတက် လာဘာ တယ်…but…န.အ.ဖ အဆိုးရပြော သလို…ပေ ၁၈၀ အထက်…တတားကြီး ဘယ်နစင်းဆောက်ပြီး ဆက်သွယ်ရေး တွေ တိုးတက်လာဘာတယ် ဆိုသလို ဖြစ်နေပြီ…တခြားနိုင်ငံတွေ မှာ တတား ဆောက် တာ အထူးအစန်းမဟုတ်တဲ့..Time ..ကြမှ….ဟိဟိ…..တခြား…လူမျိုး တွေလို…တော်တဲ့ လူတွေ လို ချင်ရင် Company တွေ က လဲလူမွေးလေ…Cadet ဆိုပြီး Ship ပေါ်တင်ပေး လိုက်ပြီး…..OS လို ခိုင်းမှတော့….AB …အလုပ်ဘဲလုပ်တတ်မှာပေါ့…….များသောအား ဖြင်. ကျောင်းဆင်း…Cadet တွေ က လူတော်တွေဘာ….But တခြား လူမျိုး…Cadet တွေ က …Officer….တွေနဲ့ …နီးနီး…စပ်စပ် နေ ရတဲ့ Time မှာ…ကျနော် တီု့..Cadet တွေ ကျတော့….Bosun တွေ..AB တွေ နဲ့…ပစ်ထားတာ ကို… Bosun …အလုပ်က မှ …ဆရာကြီး..အလုပ် လို့ ထင်သွား တာ ပေါ့….သွပ်သွပ်..(ရယ်သံ)
DMA ….ကပေးလိုက်တဲ့..Training Record Book လေးတော့…ပါဘာရဲ့….ဘယ်..Officer..မှ အဲ့ ဒီစာအုပ်တိုင်း…Systematic ကျကျ ..မသင်ပေးတော့ …DMA မှာ အင် ရမဲ့ စာအုပ် ထင်လို့..နောက်..ship တွေပေါ်တောင် မယူတော့ဘူး….ခွိ…
Bridge ပေါ်တက်တိုင်း..Compasses Error ဘဲတွက်ခိုင်းနေ တော့…CE…တွက်တတ် ရင်..Officer ကြီးလုပ်လို့ရပြီလို့တွေးခဲ့တာ…တကယ်…Offiicer ဖြစ်တော့မှ..၁၀ ခါ တ ခါတောင်..လက်တွေ့အသုံးမလိုဘူး….အဲ..စာမေးပွဲဖြေတော့ လဲတွက် ရတာ ဘဲဟာကို…:P
Rule ဘဲ ရွတ်ခိုင်းတယ်….DMA မှာမရွတ်ပြရမှာ ကျနေတာ ဘဲ …Ship TSS ဖြတ်နေတုံး Bridge ပေါ်ခေါ်ပြီး…Rule 10 များရှင်း ပြမလားလို့…သြော်…စိတ်ကူးကယဉ်မိပြန်ပြီ….ကို့အလုပ်ကို သိ…ကမ်းဝင်ခါနီးပြီ…ကြီုးသွားထုတ်မှ…..ဟဟ
ဒီကြားထဲ Bridge ပေါ် တက်ပြီး…စာသင်ရင်…Officer ကရှင်းပြနေရ တာ နဲ့…အလုပ်မတွင်ဘူး ..ဆိုပြီး….မကြိုက်တဲ့…..သူကြီး ကရှိသေး…..Indian ,Korean, Philippine Cadets တွေ…weekly အလိုက်…assignment တွေလုပ်ပြီး….ရုံးချုပ်ကို ပို့ပေးရတာတို့….Company ရဲ့ စနစ်ကျတဲ့…Training Program တို့…ဆိုတာတော့….အင်း….အင်းပေါ့လေ…ဟီး..
သူများဘဲ…အားကိုးတယ်…ကိုယ်တိုင်ကျမလုပ်ဘူးတဲ့….ship ပေါ်မှာ….Management Level က arrangement မလုပ်ပေးရင်…ဒီလောက် Opertion တွေများတဲ့ ခေတ် မှာ Rest Hour နဲ့ ကိုက်ပြီး….Work ကော…Studying ကော လုပ်ဖို့ခက်တယ်…ပြောရင်..စောက်ကြီး..စောက်ကျယ်..ပြောတယ်…ဖြစ်အုံးမယ်…..ဒီကြား..ထဲ…စာတက်သင်တာ…မကြိုက်တဲ့…တချို့ သော…Bosun တွေ..AB တွေကိုလဲ…ကြောက်ရသေး….:D
Rest Hour ဆိုလို့…ပြော၇အုံး မယ်….အလုပ်ချိန်ကို..လုံးဝ ဂရုမစိုက်တာ…Myanmar ..ထိပ်ဆုံးကဗျ…ခိုင်းလို့ ကတော့..နေ့ မအိပ်…ညမအိပ်ကိုလုပ်တာ…အေ၇ှ့…အရှေ့ က…ဆရာ့…ဆရာတွေပြောတာတော့…Myanmar တွေ က…ပေးတာယူ…ကျွေးတာစား..ခိုင်းတာလုပ်…NO Complain…အမိန့်နာခံပြီး…နေရာရအောင်လုပ်လာတာဆိုဘဲ…အဲဒီတော့….Company ရဲ့ …သူများလူမျိုးတွေ…မလုပ်ချင်တဲ့…Salary ..Rank တွေမှာဘဲ…လုပ်နေရတဲ့..Hard Worker…..Servant တွေဘဲဖြစ်နေတယ်…..ကိုယ့်ရပိုင်ခွင့် ကို..လွပ်လပ်လပ်တောင်း…..ရဲတဲ့….Smart Worker…Employee တွေဖြစ်မလာဘူး….ကျနော်တို့…လူမျိုးတွေမှာ…အရည်အချင်း၇ှိတယ်…but…မလုပ်..မ၇ှုပ်..မပြုတ်..စိတ်ကအရိုး..ဆွဲ..ပြီး..ရှိတဲ့…အဆင့် ကတတ်မလာတာ…..မအိပ်မနေဘဲ..လုပ်တာ…Impression တတ်အောင်..ဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲ…မသိဘူး…India တွေ Paper work လုပ်သလိုပေါ့….
နေရာ တခုရလာအောင်…ကြိုးစားပေးခဲ့တဲ့…ဆရာ့…ဆရာတွေကို..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်….but…ပေးတာယူ…ကျွေးတာစား…..စိတ်လေးတွေကိုတော့…သိပ် handover…မလုပ်ပါနဲ့ခဗျ….handover..ကနေ Hangover…ဖြစ်နေပြီ…ခေတ်ကပြောင်းသွားပြီလေ….ပြောသာပြောရတာဘာ…Myanmar ဆိုတာကလဲ…ရှေ့လူလုပ်တာမှကောင်းတယ်ထင်တာကို…ကျနော်လဲ..မလုပ်..မရှုပ်ဘဲ….ဟီးဟီး…ကျနော်အခုစီးနေတာလဲ…တစီးလုံး..ရွှေ..ကို…မရှုပ်မပြုတ်ပေါ့ …..ဟိဟိ…အရည်အချင်းတော့တတ်မလာတော့ဘူးပေါ့…ခိုင်းမှလုပ်တတ်တော့တယ်…^_^
Company တွေက…Private Training Center တွေ…ရှိလာတာတော့..ကောင်းတယ်ဗျ…But …လာသင်တဲ့ဆရာတွေက…အဲဒီ…Company က..Captain..တွေဖြစ်နေတော့…သင်ရိုးညွှန်းထက်….ငါက ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာ…ငါ က ဘယ်လိုဖြေရှင်းလိုက်တာဆိုတဲ့…ငါသိ..ငါတတ်..ငါသာတော်..တွေများနေတယ်…Class Room ထဲထိ….သူကြီးအကျင့်…Mr..All Known တွေကပါလာတယ်….ကျနော်တို့..ဆရာ ဦးရွှေစိုး လို ….ဆရာ..တပြည့်ဆက်ဆံရေး..နဲ့..ဆရာ…မျိုးတွေတော့လိုတယ်ဗျ….but….ဘာမှမရှိတာထက်..စာရင်တော့ကောင်းတာပေါ့..နော်…၀ုတ်ဘူးလားးးးးးး
ကျနော်တို့..လဲတကယ်တတ်ချင်ဘာတယ်….သရက်သီးစားချင်…သရက်ပင်စိုက်ရမှာပေါ့….but…မြေနေရာလေးနဲ့….ခြံစည်းရိုးလေးတော့…လုပ်ပေးကြပါ…ကျီးထိုးထိုး…ခွေစားစား…ပစ် မထားပါနဲ့လို့…..ခုတော့…ရရာနေ ရာလေးမှာ….အကြမ်းခံတဲ.့…ကန်ဇွန်းပင်ဘဲ…စိုက်ရတော့…ကန်ဇွန်းရွက်ဘဲရမှာပေါ့…နော်….ဟီးဟီး…ကန်ဇွန်းရွက်တွေလဲ…ဈေးတော့…ကြီးနေ ပါပြီ…သွပ်သွပ်
Onboard Second Mate
MT F.L.F Da La
F.L.F (ဖော်လန်ဖား)…Ship Management
March 21, 2014 at 11:38 PM Reply
Did you try to sturdy on board?Did you help or assist you are officer during your rest time?Did you question any officer.I am senior officer.but i never see Burmese cadet to try hard,for job,study.before sign off from ship,they will try to fill up their record book.for your information i am 20 years sea man lift.